Aasaaska Qurxinta Cake: Kabaxa ugu Danbeeya ee Buttercream - Sugar Geek Show - Blog
Sida loo helo geesaha fiiqan ee subaggaaga
Marka maxaa ka dambeeya dhammaan dubista, jirdil, jarista, buuxinta iyo dusha sare ee burburka? Dharka ugu dambeeya ee sharafta leh ee buttercream! Maanta waxaan kuu qaadi doonnaa tallaabooyinka sida loo sameeyo jaakad aasaasi ah oo jilicsan oo subag ah haddii aad qorsheyneyso inaad ku qanacdo keegaaga iyo haddii kale. Haddii aad seegtay dhammaan tallaabooyinkii hore ee keenay kan, hubi inaad booqato dhammaan qoraalada kale ee keega Qurxinta Aasaaska si aad ugu qabato sidaad ku imaan lahayd heerkan!
Maxaad U Baahan Tahay
Keeg jajabiyey oo la qaboojiyey
Cakegaaga duudduuban ee aad ku duuban tahay ha la qaboojiyo oo diyaar ha u ahaado.
Ku dar qaddar deeq badan oo ah buttercream dusha sare ee keegaaga. Halkan Liz ayaa adeegsanaysa Cunto fudud oo Buttercream ah .
Ku billow inaad isticmaasho spatula-kaaga is-bedbeddela si aad ugu hagaajiso subagga dusha sare. Iskuday inaad ilaaliso heerka spatula-kaaga oo aad usii waddo ilaa inta kore eeagu sidoo kale ahaado mid siman uguna macquulsan.
Bilaw inaad kudariso qadar kale oo deeqsi ah oo subag ah dhinacyada keegaaga. Ha welwelin, waxaan inta ugu badan ka qaadan doonnaa dhawaanta habka habsami u socodka.
Adeegso xaaqil keydka ama Hal abuurka Sugarworks hal abuur leh sida Liz ayaa halkan u ah sidii loo bilaabi lahaa jilitaanka dhinacyada buttercream-kaaga. Ku xaji xoqidaada si ay si yar oo xagal ah kuugu jirto xaggeeda oo aysan ku toosin xagal 90 darajo oo toosan ah keegga.
Xoqo buttercream-kaaga oo siman intaad u jeesanaysid waxaad u jeceshahay si aad u hubiso inaad ka dhigayso heerkaaga xoqan oo toosan. Xaaq xoq subagga badan ee baaquli intaad socoto.
Halkan waxaad ku arki kartaa xagasha saxda ah ee xoqintu ay tahay inay ka ahaato aragtidaada. Sii wad xoqidda illaa aad ka gaarto sabuuradda dushaada hoosteeda dhinacyaduna ay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan! Haddii aad leedahay dhowr godod halkan iyo halkaa xilligan waa caadi maxaa yeelay mar dambe ayaynu hagaajin doonnaa.
Dhinacyadaadu waa inay u ekaadaan wax sidan oo kale ah.
farrah abraham iyo james deen cajalad galmo
Qaado spatula-kaaga miisaanka nadiifka ah oo ku simbiriirixan geesahaaga kore. Sii wad xoqidda subagga badan ee subagga badan ee spatula-kaaga si aad natiijo wanaagsan uga hesho.
Waa tan waxa ay tahay inaad haysato xilligan. Hadda tan ayaan ku qaboojin doonnaa qaboojiyaha illaa inta aan ka adkeyneyno markale.
Marka keeggaagu fiican yahay oo adag yahay, ku dar hal jaakad dhuuban oo ah caano-shub dusha sare iyo dhinacyada si aad u buuxiso wixii bannaan ama godad ah ee aad weli yeelan karto.
Sii wad xoqidda iyo ku darida illaa inta ay ka jilicsaneyso sida ugu macquulsan!
Khuraafaad: Dhib malahan waxa subaggaaga u eg uu u eg yahay haddii aad ku jeceshahay keegaaga.
Runta: Joogtada ah ee subag-biyoodkaaga ayaa ah, ka jilicsan oo kafiican qofka aad jeceshahay ayaa eegi doona. Waqti qaado si aad ugu abuurto aasaas wanaagsan jacaylkaaga maxaa yeelay waxay muujin doontaa cilladaha waaweyn.
Adoo isticmaalaya spatula-kaaga miisaanka nadiifka ah mar labaad, ku jilci cidhifyada kore ee buttercream. Nidaamkan jaakad ee ugu dambeeya wuxuu qaadan karaa xoogaa waqti ah gaar ahaan haddii aad ku cusub tahay. Dulqaad yeelo oo ku celceli farsamooyinka wanaagsan xawaarahana goor dambe ayuu imaan doonaa!
Intaas ka dib waa inaad haysataa wax sidan oo kale ah! Keeg diyaar u ah in lagu daboolo macaan. Haddii aadan ku daboolin keeggaaga macaan, waxaad u baahan doontaa inaad qaadatid xitaa waqti dheeri ah si aad u hubiso inaysan cillad lahayn.
Hadda taasi waxay u dhowdahay cabsi sida aad moodeysay inay ahaan lahayd? Waad samayn kartaa! Sabirku runtii waa furaha. Haddii aad waligaa wax su'aalo ah qabtid Kooxda Sonkorta Geek marwalba waxay halkaan u joogaan inay ku caawiyaan! Toddobaadka soo socda waxaan ku dabooli doonnaa farsamo kale oo loogu talagalay jaakadda ugu dambeysa ee subagga loo yaqaan 'The Upside Down Method'. Qaabkani wuxuu badbaadin karaa waqti weyn iyo jahwareer wuxuuna keeni karaa natiijo wanaagsan laakiin maahan qof walba sidaas darteed haddii aad rabto inaad ku dheganaato habka aasaasiga ah ee aan soo bandhignay maanta, wax khalad ah kuma jiraan taas! Halkaan xukun maleh.
Shannon ayaa iska leh Shirkadda Cake ee SweetArt magaalada Lovell, Wyoming. Marti geliyaha kanaalka YouTube Barta Macaan , Shannon waxaa lagu soo bandhigay joornaallo dhowr ah oo ay ku jiraan daboolka Masters Cake . Qoraa Blog ah isla markaana gacan ka geysta Showga Geek Show.
Degel Facebook Instagram
Ka gudubka aasaasiga ah? Fiiri kuwan!
Aasaaska Qurxinta Keega: Waa In Uu Leeyahay Dib U Eegista Qalabka
Aasaaska Qurxinta Cake: Hawada Buttercream ee Hawada
Aasaaska Qurxinta Keega: Buuxinta iyo Dahaarka Jajabka
Aasaaska Qurxinta Qurxinta: Ka Fogaanshaha Duufaanta Cake
Aasaaska Qurxinta Keega: Habka Hoos Udhaca
Aasaaska Qurxinta Cake: Sirta Keega Yar
Aasaaska Qurxinta Keega: Ku daboolida keega Fondant
Aasaaska Qurxinta Keega: Sida loo helo Edgeyaal fiiqan
Aasaaska Qurxinta Cake: Foosto Fudud oo Fudud
Aasaaska Qurxinta Cake: Sida Loo Gudbo
Aasaaska Qurxinta Keega: Keegaga isdabajoogga
alaabta carruurtu ku ciyaarto ayaa nagu soo noqonaysa
cunto kariska barafka kareemka xasilloon ee xasilloon
sida loo sameeyo dhaldhalaalka muraayadda
saddex xabbadood oo shukulaato fudge cake ah oo xoqan
janet jackson wardrobe malfunction super baaquli